‘बेसार, अदुवा, लसुनले कोरोनाबाट बचाउँदैन’- डा. पौड्याल | We Nepali
‘बेसार, अदुवा, लसुनले कोरोनाबाट बचाउँदैन’- डा. पौड्याल
२०७६ चैत १४ गते १९:५५
यसलाई वैज्ञानिक रुपमा भन्दा ‘सार्सकोभ टु’ भन्छन् । जनमानसले कोरोना भनेर चिन्छन् । कोरोना भाइरसले ‘कोभिड नाइन्टिन’ भन्ने रोग ल्याउँछ । यो नौलो किसिमको रोग हो । यो सबैभन्दा पहिले चाइनाको वुहान भन्ने प्रान्तमा सन् २०१९, डिसेम्बरमा देखिएको थियो । यो रोग कहाँबाट कसरी आयो भन्नेमा निक्कै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । कसैले चमेराबाट पनि आएको भनेका छन् । पछिल्लो समय पांगोलियन भन्ने जनावरबाट आएका भन्ने समाचारमा आएको थियो तर यसको अझै पुष्टि हुन बाँकी छ ।
युकेमा वृद्धवृद्धा भन्दा नेपाली वृद्धवृद्धाको कुरा गर्नुभएको होला । सबैभन्दा राम्रो त अहिले सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नु राम्रो हुन्छ । सरकारले के भनेको छ भने ७० वर्ष माथिका उच्च जोखिममा पर्छन् । त्यसैले उहाँहरुलाई तीन महिना घरै बस्ने सल्लाह दिएको छ । ७० वर्ष कट्दैमा सबैजना उच्च जोखिममा हुन्छन्, उनीहरुलाई रोग लागिहाल्छ भन्ने पनि होइन । ७० वर्ष कटेकामध्ये पनि जसको शारीरिक अवस्था कमजोर छ, जसलाई पहिल्यैदेखि केही रोग लागेको छ, मधुमेह, मुटुको रोग वा अन्य कुनै रोगले च्यापिराखेको छ भने उनीहरुलाई अलि बढी यो रोगले समात्छ । वृद्धवृद्धाहरुले सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे दुईजनाभन्दा बढीको समूहमा ननिस्कने, आफ्ना छोरा नाति छन् भने उनीहरुलाई पसल पठाउने । एक्लै बस्नुभएको छ भने आफन्तहरुलाई फोन गर्नुहोला किनमेलको लागि । तपाई आफैँ निस्कनुपर्ने भयो भने अलि भीड कम हुने, सुनसान हुने प्राय: दिउँसोको समयमा निस्कनुहोला । पसलमा पनि अर्को व्यक्तिसित दुई मिटरको दूरी राखेर लाइनमा बस्नुहोला । घर बस्दा पनि गाह्रै हुन्छ । वृद्धवृद्धाहरु तथा अन्यले पनि पत्रपत्रिका, पुस्तक पढ्ने, बगैँचामा काम गर्ने, सरसफाइ गर्ने, योग, ध्यान गर्ने, हल्का कसरत गरेर आफूलाई ब्यस्त बनाउन सक्नु हुन्छ ।
यो रोग मानिसले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा निस्कने कणबाट सर्छ भनिएको छ । एकपटक मानिसले खोक्दा तीनहजार कणहरु निस्कन्छन् भनिन्छ । हाच्छिउँ गर्दा १० हजार वटा कण निस्कन्छन् भनिन्छ । त्यसैले तपाईले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा कोही मानिस अगाडि नै छ भने उसले श्वास फेर्दा यो रोग सर्न सक्छ तर हावाबाट यो रोग फैलन्छ भने अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन । खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा सतहमा खसेका कणहरु हातले छुँदा यो रोग सर्न सक्छ । यसरी सतहमा छुँदा हातमा आउन सक्ने भाइरसलाई मार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ साबुनपानीले हात धुने नै हो । खासगरी बाहिर गएर आउँदा वा ट्वाइलेट गइसकेपछि साबुनपानीले हात राम्रोसँग धुनुपर्छ ।
फ्लु चाहिँ इन्फ्लुएञ्जा भाइरसले हुन्छ यो चाहिँ कोरोना भाइरसले हुन्छ । भाइरस नै फरक पर्यो । लक्षणहरु उस्तै देखिए पनि मृत्युदरमा ठूलो फरक छ । फ्लुले हजारमा एकजना मान्छे मार्छ भने कोरोनाले हजारमा ३० जना मार्नसक्छ । फ्लुले भन्दा कोरोनाले ३० गुणा बढी मान्छे मार्छ ।
बेलायत सरकारले चरणवद्ध रुपमा नीतिहरु ल्याएको छ । शुरुमा चीनमा यो रोग देखिने बित्तिकै युकेले केही गरेन । शुरुमा युके सरकारको नीति करिब ६०/८० प्रतिशत जति मानिसलाई यो भाइरस लाग्न दियो भने प्रतिरोध क्षमता आफै बढ्छ र दीर्घकालिन समाधान हुन्छ भन्ने थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ‘मिटिगेट’ नीति ल्याइयो । त्यो चाहिँ संकेत देखिएको मानिस एक्लो छ भने सात दिन, परिवारमा छ भने १४ दिन घरमै बस्ने नीति हो, तर स्कुलहरु खुल्ला नै राखियो । यातायातहरु सुचारु नै राखियो । यदि त्यसरी नै छोड्ने हो भने करिब साढे दुई लाख मानिस मर्न सक्छन् है भनेर इम्पेरियल कलेज लण्डनका वैज्ञानिकहरुले सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसपछि सरकारले रोगलाई दबाउने नीति ल्यायो । तर, अहिले पनि युकेले पूर्णरुपमा ‘लक डाउन’ गरेको छैन । रेल, बस चलेकै छन् । कतिपय कामहरु जस्तै निर्माणसम्बन्धी पनि रोकिएका छैनन् । अरु देशको स्थिति हेर्दा यो अझै पर्याप्त छैन भन्ने देखाउँछ जबकि चीन, दक्षिण कोरियामा पूर्ण रुपमा आवतजावत रोकिएको थियो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै चाहिन्छ कि जस्तो देखिन्छ ।
खासकारण पूर्व तयारीको अभाव हो । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने जतिसुकै विकसित देश र राम्रो स्वास्थ्यसेवा भएको मुलुकले पनि एकैचोटी ठूलो संख्यामा बिरामी भए भने धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । इटली, स्पेन र फ्रान्समा भएको त्यही हो । पहिला चाइनाबाट एक/दुई वटा केसहरु भित्रिँदा त्यति महत्व दिइएन । यो रोग असाध्यै संक्रामक छ र एक /दुई हप्तामै धेरै ठूलो संख्यामा फैलन सक्छ । मान्छेमा लक्षण देखिँदैन, तर समातिसकेको हुन्छ । इटलीको सन्दर्भमा अलि ढिलो मात्र नियन्त्रणमा लिन थालियो । खास स्वास्थ्य सेवा नराम्रो वा मान्छे नै फरक भएर धेरै मानिस मरेका होइनन् । हुनत इटली विश्वको दोस्रो बढी वृद्धवृद्धा भएको देश मानिन्छ, धुम्रपान पनि उच्च छ तर मुख्य कारण प्रयास ढिला भएर नै हो ।
बेलायत सरकारको नीति ‘हेर्दै जाउँ’ भन्ने देखिन्छ । अहिले लिइएको नीतिले के कति फरक पार्छ त्यसअनुसार आवश्यक नीति लिने भन्ने देखिन्छ । यदि स्थिति सुधार भएन भने स्पेन, इटलीमा जस्तै कम्प्लिट लक डाउनको अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो होला जस्तो देखिँदैन । तर यो नौलो किसिमको रोग भएकाले कतातिर जान्छ भन्ने अनुमान गर्न नै गाह्रो छ ।
अहिले त नेपालमा पनि यस महामारीको भय बढेको छ र ‘लक डाउन’ गरिएको छ । अन्य मुलुकको अवस्था हेरेर नेपालले अहिले के गर्नुपर्ला ?